शैक्षिक सत्र सर्दा कसलाई के असर पर्ला ?
विष्णु परियार, काठमाडौं । गत वर्ष यति बेला विद्यार्थीहरु परीक्षाको तयारी गरिहेका हुन्थे । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी झन् परीक्षाकाे चटारोमा हुन्थे । तर यस बर्ष अवस्था फेरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी जेठमा हुने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) को तयारी थालेको छ । बोर्डले परिक्षा जेठको दोस्रो साताभित्रै सक्ने गरी तयारी थालेको हो । यसअघि सरकारले एसईई
काठमाडौं, (नेस) । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन हुने बालपत्रिका ‘बालप्रज्ञा’को तेस्रो अङ्क प्रकाशन भएको छ । यस पत्रिकाले बाल स्रष्टादेखि प्रौढ स्रष्टासम्मका बालउपयोगी सामग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
मालपोतमा घूस नदिई काम हुँदैन भन्ने कुरा एकादेशको कथा हो
रविन अधिकारी मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय वलिङ मालपोत ऐन संशोधन क्रममा रहेको र उक्त ऐन संशोधन गरी प्रमुख मालपोत अधिकृतले गर्ने काम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको शैक्षिकसत्र जेठ अन्तिमसम्म लम्ब्याउने भएको छ । शिक्षा नियमावली संशोधन भएपछि शैक्षिकसत्र तय गर्ने अधिकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
दुई दन्त चिकित्सक मागेको २ सय ७१ को निवेदन आयो
डा. अञ्जना महर्जन, दन्त विशेषज्ञ, पाटन अस्पताल पिपुल्स डेन्टल कलेजबाट बीडीएस अध्ययन पूरा गरी डा. अञ्जना महर्जनले वीर अस्पतालबाट पाँच वर्षअघि पोस्ट दन्त (कृत्रिम दाँत) का विषयमा मास्टर्स गर्नुभएको छ
‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ सञ्चालनमा
बैतडी, (नेस) । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा बैतडीका ३ स्थानीय तहमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन आएको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम
त्रिविले पुनर्संरचनापछि मात्र सम्बन्धन दिने
काठमाडौं, (नेस) । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार नगरी सम्बन्धन नदिने भएको छ । उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले सरकारले उल्लेख गरेको नीति कार्यक्रममा त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेपछि सो
‘शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ’ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आज सानोठिमीस्थित शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको
चिकित्सा क्षेत्रको माया छ, गायनमा मज्जा छ : डा. रणजित कुमार झा
डा. रणजित कुमार झाको परिचय दुईतिर फैलिएको छ। एकातिर उनी एक कुशल फिजिसियन तथा मधुमेह र मुटु विज्ञ हुन् भने अर्कातिर प्रतिभाशाली गायक। बंगलादेशबाट एमबीबीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (आईओएम),
कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्य
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गरेको छ । पाठ्क्रम विकास परिषदको बैठकले माध्यमिक तहमा गणित विषयको
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न डडेल्धुरामा घुम्ती बैठक शुरु
राम धामी, डडेल्धुरा । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डडेल्धुराले जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मोवाईल घुम्ती बैठक शुरु गरेको छ । प्रत्येक चार/चार महिनामा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा
कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्यमा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई पनि अनिवार्यमा राखिएको छ । कक्षा
पाँच वर्षपछि दरबार हाइस्कुलमा पठनपाठन शुरु
शर्मिला पाठक, काठमाडौं । पुनःनिर्मित सम्पदा रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय) मा आजदेखि भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन शुरु भएको छ । भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि आजदेखि यस विद्यालयमा
कर्णाली । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेत, नेपाल र चाइनाथ्री गर्जेज विश्वविद्यालय, चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । दुवै विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्यका लागि यही माघ १६ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण विद्यालय बन्द
धनुषा । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरको कारण धनुषासहित तराई मधेशमा अत्यधिक जाडो बढेपछि मिथिला नगरपालिकाले माघ २१ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पुसको अन्तिम सातादेखि शुरु
काठमाडौं । विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या बढेपछि रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कूल (भानु माध्यमिक विद्यालय०को कक्षाकोठामा सिट क्षमता बढाइएको छ । नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने क्रम जारी रहेपछि यस विद्यालयले ५,
प्रा. गोमादेवी निरौला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासकका साथै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । विगत ३६ वर्षदेखि अनवरतरुपमा नर्सिङ सेवाका
काठमाडाैं । रिकी गाइडो भान जेनेचनको लोकप्रिय पात्र हो। उनका रिकी शृंखलाका पुस्तकहरु लोकप्रिय छन् । कथालय प्रकाशनले बालबालिकाका लागि जेनेचनको रिकी शृंखलाका तीन वटा कथा संग्रह सार्वजनिक गरेको छ—
सिमकोट । हिमाली जिल्ला हुम्लाका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालय यही माघ १५ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएका छन् । तीनवटा गाउँपालिका रहेका हुम्लामा ७७ सामुदायिक तथा निजी विद्यालय रहेका छन्